Unyaka Webhizinisi Elincane Lomphakathi | Martech Zone
Noma nini lapho ngizwa ukuthi othile uqala ibhizinisi noma unebhizinisi lakhe elincane, ngiyabahlonipha ngokushesha. Amabhizinisi amancane akha iningi lenethiwekhi yethu enwetshiwe futhi sonke sisebenza kanzima ukukhulisana olwandle lwama-goliath. Ngijwayele ukuncika kumabhizinisi amancane kakhulu ngoba wonke amakhasimende ayikhasimende eliyisihluthulelo… akusona nje isithembiso, kuyiqiniso. Amabhizinisi amancane aphendukela kumanethiwekhi omphakathi ngokuya ngokwengeziwe ukuncika kwinethiwekhi yawo, ukuthola amakhasimende amasha, ukufunda ngomkhakha wabo, igunya lokusungula. I-LinkedIn iyisisekelo salokhu kuzibandakanya.
Ungamangala ngalokho okutholwe yi-LinkedIn: Ama-94% wabaphenduli bocwaningo abasebenzisa imithombo yezokuxhumana bathe bayayisebenzisela ukumaketha, kanti abathathu kwabayisihlanu bathi izinxazululo zomphakathi ngenselelo yebhizinisi eyinhloko yokuheha amakhasimende amasha. Izinkampani zokukhula kwe-hyper, imithombo yezokuxhumana ibaluleke kakhulu. Batshala imali ezinkundleni zokuxhumana ukwedlula noma yisiphi esinye isiteshi, futhi bayavuma ukuthi kusebenza kakhulu ekufezeni izinhloso zokumaketha njengokufaka uphawu lokumaka uphawu, ukumaketha okuqukethwe, kanye nokwenza isizukulwane esiphambili.
Vakashela I-microsite yebhizinisi elincane le-LinkedIn ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi i-LinkedIn ingakusiza kanjani ukufeza izinhloso zakho zebhizinisi ezihlukile ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana.
Tags: LinkedIni-biz encaneIbhizinisi elincanesmb
Mar 10, 2014 ku-8: 02 AM
Okuthunyelwe okufundisa kakhulu futhi kumnandi impela. Ungeze imininingwane eminingi kubhulogi yakho. Ngiyabonga
ukwabelana ngalolu lwazi olubalulekile.